Fepetran'ny serivisy - Sendfiles.online
Raiso ny rakitra
Misaotra tamin'ny fampiasana Sendfiles.online!
Eto ambany ianao dia hahita fandikana henjana momba ny serivisy momba ny serivisy amin'ny teny anglisy ary ny politikantsika momba ny tsiambaratelo amin'ny teny anglisy ho an'ny lafiny ara-dalàna, samy mihatra amin'ny teny anglisy ihany.
Amin'ny alàlan'ny fidirana ny tranokala ao amin'ny https://sendfiles.online, manaiky ny hofehezin'ireo fepetra momba ny serivisy ireo ianao, ireo lalàna sy fitsipika rehetra azo ampiharina, ary manaiky ianao fa tompon'andraikitra amin'ny fanarahana ireo lalàna misy eo an-toerana. Raha tsy manaiky w
Ny fahazoan-dàlana dia alaina misintona vetivety ny fakana fitaovana (fampahalalana na rindrambaiko) ao amin'ny tranokalan'ny Sendfiles.online ho an'ny fijerena ny fizahana miorina amin'ny tsy ara-barotra manokana. Izany no fanomezana lisansa, tsy famindrana lohateny, ary eo ambanin'ny t
Ampiasao ny fitaovana ho an'ny tanjona ara-barotra, na ho an'ny fampisehoana ampahibemaso (tsy misy varotra na tsy fivarotana);
manandrana manongotra na hampiodina ny injeniera misy rindrambaiko misy ao amin'ny tranokalan'i Sendfiles.online;
Ity fahazoan-dàlana ity dia ho tapitra eo ho eo raha toa ianao ka manitsakitsaka ny iray amin'ireo fetrany ireo ary mety hatsahatra amin'ny Sendfiles.online amin'ny fotoana rehetra. Rehefa tapitra ny fijerinao ireo fitaovana ireo na rehefa tapitra izany fahazoan-dàlana izany dia tsy maintsy mamotika izay rehetra ianao
3. Politika fitehirizana
Mitahiry rakitra mandritra ny 48 ora ny sendfiles.online. Avy eo dia voafafa ny rakitra. Ny rakitra dia mifandraika amin'ny adiresy mailaka izay nandefa azy ireo. Raha mailaka nalefa handefasana mailaka izay voatahiry koa. Raha ny rakitra alefa avy amin'ny mpampiasa PRO, mihatra ny teny samihafa ary haseho eo amin'ny pejy fampidinana misintona.
Ireo fitaovana amin'ny tranokala Sendfiles.online dia omena amin'ny alàlan'ny 'as is'. Sendfiles.online dia tsy manome antoka, nambara na nampiditra azy, ary noho izany dia mandà ary mandà ny antoka hafa rehetra, anisan'izany, tsy misy fetra, na fampandehanana
Ankoatr'izay, ny Sendfiles.online dia tsy manome antoka na manao fisolokiana momba ny marina, vokatra mety, na fahatokisana ny fampiasana ireo fitaovana eo amin'ny tranokalany na mifandraika amin'ny fitaovana toy izany na amin'ny tranokala mifandraika amin'ity tranokala ity.
Raha tsy misy na inona na inona dia tsy manan-kery ny Sendfiles.online na ny mpamatsy azy (na dia tsy misy fetra aza, fahavoazana noho ny fahaverezan'ny data na tombony, na noho ny fanelingelenana amin'ny raharaham-barotra) vokatry ny fampiasana na tsy fahaizana mampiasa ireo fitaovana amin'ny Sendfiles.o
6. Ny akora fitaovana
Ny fitaovana hita amin'ny tranokala Sendfiles.online dia mety misy hadisoana eo amin'ny lafiny teknika, typografika na sary. Sendfiles.online dia tsy manome antoka fa ny fitaovana rehetra ao amin'ny tranokalany dia marina, feno na ankehitriny. Sendfiles.online mety m
Sendfiles.online dia tsy nijery ny tranokala rehetra nifandray tamin'ny tranokalany ary tsy tompon'andraikitra amin'ny votoatin'ny tranonkala mifandraika amin'izany. Ny fidiran'ny rohy rehetra dia tsy manondro fankatoavana avy amin'ny Sendfiles.online amin'ilay tranokala. Ampiasao ny tranonkala mifandraika amin'izany
Sendfiles.online dia mety hamerina ireo fepetra momba ny serivisy ireo ho an'ny tranokalany amin'ny fotoana rehetra tsy misy fampilazana. Amin'ny fampiasana ity tranonkala ity ianao dia manaiky fa hofehezin'ilay dikan-teny atokana ho an'ny vanimpotoana ankehitriny.
9. Lalàna mifehy
Ireo fepetra sy fepetra ireo dia fehezin'ny sy voarindra mifanaraka amin'ny lalàn'ny Connecticut ary manaiky tsy ara-dalàna ny fitsidihan'ny fitsarana ao amin'io Fanjakana na toerana io ianao.
© 2021 Sendfiles.online v1.15 | 75,266 fandefasana nalefa hatramin'ny 2020